TARATRY NY LASA: nampiaraka ny fanatanjahantena sy ny fianarana Rabesaotra Magally
Par Taratra sur 17/01/2022 NS Malagasy, NS-Sports
Anisan’ireo mpilalao basikety vehivavy sangany fahiny, Rabesaotra Magally. Tia fanatanjahantena izy ary nahay nampiaraka izany tamin’ny fianarany. Nianatra tao EN3 nanaraka ny lalam-piofanana EPS teny Ankatso izy ka nahavita izany hatramin’ny taona fahatelo. Manao fanatanjahantena rehefa tsy mianatra. Nanome fandanjalanjana ny fiainany ny spaoro, na teo amin’ny ara-batana izany na ny ara-tsaina. Mpilalao kalaza maro […]
Nodimandry i Alban: very olomanga ny kitra ao Boeny
Nitomany ny mpankafy ny baolina kitra ao Boeny. Nodimandry ny zoma lasa teo, Rabemananjara Alban (Baban), mpilalao kalaza nitondra avo ny lazan’ny faritra andrefana sy i Madagasikara iray manontolo. Ny aretina nahazo azy efa ho volana vitsy no nitarika ny fahafatesany. Lohalaharana tao amin’ny AC Sotema, ekipa niatrika ny ampahefa-dalana, niadiana ny ho tompondakan’i Afrika, […]
Kitra – «Orange Pro league 2022»: resin’ny Uscafoot ny Jet Kintana
Nahazo fandresena indray ny Uscafoot Analamanga, teo amin’ny andro fahefatra hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja baolina kitra “Orange pro league 2022”. Resin’ny ekipan’ny kaominina Antananarivo renivohitra, tamin’ny isa 2 no ho 0 mantsy ny Jet Kintana Itasy. Fihaonana, notanterahina tetsy amin’ny kianjan’Alarobia, ny asabotsy lasa teo. Vao teo am-panombohana dia efa naneho ny fahavononany […]
Can 2022: Ekipa telo tafita amin’ny ampahavalon-dalana
Firenena telo no nisongadina teo amin’ny andro roa voalohany, amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny amboaran’i Afrika ho an’ny ekipam-pirenena (Can 2022). Manohy ny lalany i Kameronina sy i Nizeria ary i Maraoka. Hatreto, firenena telo no efa nahazo ny tapakila hiatrehana ny ampahavalon-dalana amin’ity fiadiana ny amboaran’i Afrika (Can 2022), tanterahina any Kameronina ity. Anisan’izany, […]
Toetr’andro : hitohy ny oram-baratra
Par Taratra sur 17/01/2022 Divers, NS Malagasy
“Hitohy ny oram-baratra ao anatin’ny telo andro eto Analamanga ary faritra maro koa no hisitraka izany”, hoy ny teknisianina mpamantatra ny toetr’andro eny Ampandrianomby, omaly. Mbola mahazo vahana ny tsioka talio ka anatin’ny atifahavaratra tanteraka izao ny eto amintsika. Noho ny hamandoana entin’ny rotsak’orana sy ny faharefoan’ny ankamaroan’ny fotodrafitrasa misy, entanina ny olona ho mailo […]
Fanadinam-panjakana: hatao ny 21 jona ny CEPE
Namoaka ny daty ofisialin’ny fanadinam-panjakana ho an’ny ankizy eny amin’ny EPP sy ny CEG ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny faran’ny herinandro teo. Fantatra tamin’izany fa hotanterahina ny 21 jona izao ny fanadinana CEPE sy 6ème. ny 4 ka hatramin’ny 7 jolay kosa ny fanadinana BEPC sy 2nde. Ny 30 sy 31 aogositra ny CAE/EP ary ny […]
Faha20 taona – Tarika Koike: nisongadina ny hiran’ny Vetson’Androy
Par Taratra sur 17/01/2022 NS Malagasy, NS-Culture
Nitotorebika, nifaly… Fahombiazana sy haravoana no nandravaka ny fankalazana ny faha20 taonan’ny ny Tarika Koike, ny faran’ny herinandro lasa teo, tetsy amin’ny Le Glacier Analakely. Nanamarika izany ny fanontronan’ireo Zoky eo amin’ny mozika toa an’i Prosely (Kaimba ), izay nihira ny « Kotrobaratra » sns… Nokaloina tao ny hiran’ny Vetson’Androy ho mariky ny fanomezam-boninahitra ireo mozikany toy […]
Fanefitry ny Covid-19: Ilaina ny fanaovana fatra fanampiny amin’ny vaksiny
Par Taratra sur 17/01/2022 Faits Divers, NS Malagasy
Nanome toromarika ny Vondrona teknika sy ny Akademiam-pirenena momba ny fitsaboana eto Madagasikara (Anamem) tamin’ity fiandohan’ny taona ity fa ilaina ny manao vaksiny fanampiny hiadiana amin’ny Covid-19. Taorian’ny fatra iray na fatra roa efa azon’ny olona nisitraka izany mba hampahomby ny fiarovana. Ireo efa nahavita tanteraka ny fatra ilaina amin’ny karazam-baksiny nosafidiny no afaka mandray […]
15 janoary 2022 – Fanamarihana roa sosona: harembakoka ara-tsain’ny zanak’olombelona ny kabary
Nahadingana zana-tohatra iray indray ny kabary malagasy. Goavana ny ezaka vita satria ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy no nankato izany. Nisalotra lamba vao nanome hasina sy lanja azy maneran-tany ny kabary malagasy… Araka ny fangatahana nataon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ka nankatoavin’ny filankevitry ny governemanta ny 12 janoary lasa teo, lanonam-panjakana manetriketrika no notanterahina teny […]
Fanavaozana ny lisi-pifidianana : mbola ambany ny tahan’ny fisoratana anarana
“Iray volana sy tapany izay no nanombohana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy (Ral), izay voalazan’ny didy aman-dalàna hoe atomboka isaky ny 1 desambra ary faranana vonjimaika amin’ny faran’ny febroary amin’ny taona manaraka. Efa nisy ny tombana natao ary nahitam-bokatra: raha akapoka, somary mbola ambanimbany izany.” Io ny fanazavan’ny mpampakatenin’ny Ceni, Andriamarotafikatohanambahoaka Ralaisoavamanjaka. Anisan’ny mahatonga […]
Fiarovana ny tontolo iainana :hatomboka any Mahanoro ny fambolen-kazo 2022
Hisokatra ny amin’ny fomba ofisialy any Mahanoro, faritra Atsinanana ny fambolen-kazo, ho an’ity taona ity. Hotanterahina ny alarobia izao izany. Nofidina manokana iny faritra iny amin’ny maha mando lava azy sady mitondra rotsak’orana any Atsinanana ny ala. Zava-dehibe ho amin’ny fihazonana ireo fivoarana ekolojika, ilaina amin’ny fahaveloman’ny karazan-javamananaina “Biodiversité” mampiavaka antsika izany. Hatao amin’ny velaran-tany […]
Tambajotra sosialy:mampitandrina ny MFPTLS
Nisehoana hosoka ato anatin’ny tambazotra sosialy milaza fa mahavita mikarakara ny fanaovana ny « Equivalence administratives » ary manao izany ny « Shopntsika 101 ». Eo koa ilay ramatoa iray milaza fa miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Asa, ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy (MFPTLS). Manoloana izany, namoaka fanambarana ny minisitera. “Maneho sy manamafy izahay fa hosoka sy […]
Vinan’ny fiangonana: hanangana radio ny METM
Par Taratra sur 17/01/2022 NS Malagasy, NS-Politique
Mijery lavitra kokoa. Hanangana radio Fitahiana ny eo anivon’ny fiangonana “Mission evangelique” teratany Malagasy – METM”, amin’ity taona ity. Tafiditra ao anatin’ny vina 2022 izany. Eo koa ny tafika Masina any amin’ny faritra Androy. Ny fananganana fiangonana amin’ireo toerana mbola tsy misy METM. Manampy izany ny hantanterahina ny zaikabe ho fifidianana ireo sampana eo anivon’ny […]
Banga ny tontolo politika: nodimandry ny loholona Eongombelo
Banga ny tontolo politika ary misaona koa ny Antenimierandoholona. Nodimandry, ny faran’ny herinandro teo ny loholona, Eongombelo Jean Marcel, avy any amin’ny faritan’i Toliary. Nahafantarana azy ny hoe : « Marcel Top ». Lisitra faharoa, miaraka amin’ny loholona Neypatreik ny tenany tamin’ny fifididianana loholona farany teo. Anisan’ireo mpandrindram-paritry ny Mapar /TGV any amin’iny faritra atsimo iny ny tenany. Ankoatra […]
« Ecran plat », vatomamy, « Apollo 21 », volamena…:maromaro ireo dosie lehibe miandry ny fidiran’ny fitsarana
Hiverina hiasa ny eo anivon’ny fitsarana, manomboka izao rehefa niato iray volana izany avy niala sasatra. Maromaro ireo raharaha lehibe miandry azy ireo amin’izao taom-piasana izao. Anisan’ny andrasan’ny maro ny momba ilay volamena 49 kg sarona tatsy Kaomoro, ny faran’ny taona teo sy ny momba ireo Malagasy roa lahy, voasaringotra amin’izany. Tsy nivoaham-pofona mihitsy ny […]
“Raharaha volamena”: nandiso ny vaovao miely ny primatiora
Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny primatiora fa tsy marina ny filazana miparitaka any anaty tambajotran-tserasera any. Voalaza amin’izany fa misy rohim-pihavanana na olona akaiky ny Praiministra Ntsay Christian ireo voasaringotra amin’ny fanondranana an-tsokosoko ilay volamena 49 kg, voasambotra tao Moroni, Kaomoro. Nodisoin’ny primatiora izany ary niantso ny rehetra ho mailo sy hamakafaka hatrany ny vaovao […]
Fitondrana am-bavaka ny taom-piasana: miantso ho amin’ny fiovana sy hiasa ary hitraka ny FJKM
Hafatra mafonja. Notanterahina, omaly teny Antsonjombe ny fitondrana am-bavaka ny taom-piasana ho an’ny FJKM. Niarahabana koa ny filohan’ny fiangonana, Andriamahazosoa Irako sy ny fianakaviany izany amin’izao taona vaovao izao. Nisy ny hafatra anaty teboka efatra, nampitainy tamin’izany. Eo ny tokony hitrakana, manoloana ny aretina, ny olana samihafa ka nampaharezany ny rehetra tsy hitanondrika. “Efa nandresy […]
Polisy monisipaly: nivoaka ny andiany “Kintana”
Navoaka ny asabotsy teo teny Alarobia ny andiany Kintana amin’ireo polisy monisipaly eto Antananarivo Renivohitra. Miisa 97 izy ireo ary niatrika fiofanana ara-miaramila sy ny fametrahana filaminana tao anatin’ny herintaona. “Hiasa avy hatrany izy ireo. Efa handray mpiofana vaovao indray izao ny eo anivon’ny CUA”, hoy ny lehiben’ny polisy monisipaly, ny kaomisera Ostrom Whens. Niaiky ny […]
Politika… ady fiady
Par Taratra sur 17/01/2022 Edito Taratra, NS Malagasy
Mafanafana indray ny politika amin’izao? Misy ny tandindomin’ny fifidianana hahazoana fahefam-panjakana, ao ny te hamita ny fanamby fa kely sisa ny fe-potoam-piasana… Ady fiady avokoa izany. Lasa mahabe resaka sy adihevitra indray ny amin’ny fahazoana sy fahalalahana maneho hevitra. Misy ny mitabataba fa zo ary malalaka ny fanehoan-kevitra. Tsy efa ao anatin’izay ve ny fahazoana […]
Par Taratra sur 17/01/2022 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Tsy mitsahatra mamono olona ny covid-19. Niakatra indray koa ny tahan’ny tranga vaovao. Anisan’ny tsy afa-bela ny eto Analamanga sy Diana ary Vakinankaratra raha roa kosa ireo faritra tsy ahitana izany. Mbola manjaka ny gaboraraka sy ny goragora. Nanao ny tomban’ny herinandro (8 janoary-14 janoary 2022) momba ny Covid-19 ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Nisongadina tamin’izany […]
Tafika Malagasy: nahazo tohana avy amin’ny “Korea food for hungry international”
Tonga nanolotra vary 200 gony ho an’ny Tafika Malagasy ny “Koren food for hungry international” (KFHI), ny zoma teo. Nandray izany ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny Amiraly Ranaivoseheno Antoine de Padoue niaraka tamin’ny talen’ny kabinetra, ny Jly Rajaonarivony Alexandre. Fanohanana amin’ny ady ataon’ny miaramila amin’ny covid-19 sy ny kere no tena anton’izao fanomezana izao, […]
Fikasana hitsoaka ny fonjaben’i Morondava…: Gadra 7 lahy voasambotra, mpiandry fonja iray naratra
Raikitra indray ny savorovoro tao amin’ny fonjaben’i Morondava tamin’ity fisiana gadra fito lahy nikasa hitsoaka ny fonja, saingy voafehin’ireo mpandraharahan’ny fonja izy fito lahy ka tsy afa-nandositra. Araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny fonja Menabe, i Darson Havelomamiakadaza Jean Michel, tsy misy voafonja tafatsoaka izany tao amin’ny fonjan’i Morondava. Fikasana saika hitsoaka no nisy. Fito lahy […]
Antaninarenina: novakian’ny jiolahy ny rindrina, firavaka volamena maro voaroba
Tokony ho tamin’ny 10 ora alin’ny zoma teo, nanararaotra ny fahanginana ireo olon-dratsy. Mpivarotra firavaka iray etsy Antaninarenina, tsy lavitry ny GAB ana banky iray eo an-toerana no lasibatry ny vaky trano tamin’io fotoana io. Voaroba tamin’izay ny firavaka volamena maromaro. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola voafitra ny tentim-bidin’ireo firavaka sarobidy very ireo. Tsy […]
Ambatondrazaka: taksiborosy tapaka frein, olona telo maty
Nitrangana lozam-piarakodia tao Andilampotsy Ambatondrazakao, omaly. Taksiborosy zotra rezionaly mampitohy an’Ambatondrazaka sy Amparafaravola ity tra-doza ity. Niala tao Ambatondrazaka ity taksiborosy ity ka teo amin’ny 5km miala ny tanàna no nitranga ny loza. Voalaza fa tapaka frein teny am-pandehanana ilay taksiborosy ka antony nahatonga izao loza izao. Vokany, maty tsy tra-drano ny telo tamin’ireo mpandeha […]
Rindrim-bato nihotsaka: mpirahavavikely herintaona sy dimy taona maty tototry ny tany
Namoa-doza ny ora-nikija tao Fianarantsoa, ny asabotsy tolakandro teo. Mpirahavavy vao herintaona sy tapany sy dimy taona maty tototry ny rindrim-bato nilatsaka tao amin’ny trano fonenany. Ranomaso, alahelo. Ireo no nisoritra ny endrik’ilay renim-pianakaviana iray namoy zanaka mirahavavy, ny asabotsy teo tao Fianarantsoa. Maty voatototry ny rindrim-bato ny zanany mirahavavy vao herintaona sy tapany sy […]
« Précédent 1 2 3 4 5 6 … 1 817 Suivant »